UAna de las Tejas Verdes: imalunga nantoni, uhlobo, abalinganiswa kunye nokulandelelana | Uncwadi lwangoku
UAna de las Tejas Verdes yincwadi yolutsha ilungele nawuphi na umntwana. Kuyo, sidibana nenkedama encinci ekhangela kuphela ikhaya apho iziva ithandwa khona, kunye nethuba lokufunda nokwenza into entle ebomini.
Ukuba ubonile uthotho kunye neemovie, ukuba awumazi, siza kukunceda uthande olu luhlu lweencwadi, ukuqala ngeyokuqala: UAna de las Tejas Verdes.
1 Isishwankathelo sencwadi
2 Uhlobo luka-Anne weGreen Gables
3 U-Anne weGreen Gables Abalinganiswa
3.1 UAna Shirley
3.2 UMateyu Cuthbert
3.3 UMarilla Cuthbert
3.4 UDelilah bela
3.5 UGilbert Blythe
4 Emva kuka-Anne weGreen Gables
5 Malunga noLucy Maud Montgomery, umbhali
Xa endaweni yenkwenkwe yenkedama ababezama ukuyithatha, u-Ana Shirley, intombazana eneminyaka elishumi elinanye ebomvu ebomvu, uvela kubomi bukaMarilla noMatthew Cuthbert, abazalwana ababini abangatshatanga abahlala kwikhaya losapho lwabo eGreen Gables, e idolophu encinci yaseAvonlea, ubomi bakhe kunye nabo bamngqongileyo bayotshintsha ngonaphakade. Ngokuzonwabisa kwakhe, ukuhleka kunye neenyembezi, kwaye ngaphezulu kwako konke ukonwaba kunye nokucinga, uAna uya kuba yinxalenye yosapho okokuqala ebomini bakhe, kwaye abenendawo anokuthi ayibize ikhaya ngonaphakade.
Kubekwe ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, kwindawo enomlingo njengePrince Edward Island, eCanada, eAna, leyo ivela eGreen Gables izakusithatha ngamehlo ale ntombazana iphaphileyo kwaye imsulwa ukuba silive ilizwe liyinto entsha ngokupheleleyo, ukuba nemincili nokuhleka ngeziganeko zabo, kwaye ekugqibeleni, babone ubomi buvela kwiprism eyakhayo nenomdla Lo msebenzi, njengoluhlu lonke lwe-Ana Shirley, udibanisa amaxabiso obomi basemaphandleni kunye nosapho kunye nemibuzo yendalo yonke esizibuza yona ngaxa lithile, enjengokuba ngumhlaba, ixabiso lobuhlobo okanye undoqo wothando.
Uhlobo luka-Anne weGreen Gables
U-Anne weGreen Gables ithathwa njengenoveli. Ngaphakathi kuyo, bekuya kuba kuhlobo lwentsomi, kodwa nakwinqanaba loncwadi lolutsha, ngenxa yobudala be-protagonist kunye nembali ahlala kuyo.
U-Anne weGreen Gables Abalinganiswa
Ngaba uyafuna ukudibana nabanye babalinganiswa kwinoveli? Ngokwenyani, zininzi ekufuneka zichongiwe, ke siza kuthi nca ezimbalwa kuzo.
Ungumlinganiswa ophikisayo, hayi u-Ana de las Tejas Verdes kuphela, kodwa kuzo zonke izinto ezazikho. Umbhali umchaze njenge okrelekrele, ophumayo, oyinkedama ophuphayo nonamaphupha kodwa ngentliziyo elungileyo kakhulu. Kwaye ndinomnqweno omnye: ukuba yinxalenye yosapho kwaye ndikwazi ukufunda.
Ungumntakwabo Marilla omncinci, abo bafuna ukuthatha inkwenkwe kwaye bayothuka kukufika kwentombazana. Baqhuba ifama abayifumana kwilifa losapho kwaye ungumntu oneentloni, ozolileyo kwaye olunge kakhulu.
Udade omdala kaMateyu kunye bafunde besebancinci ukuba kufuneka bazinyamekele ukuze baphile. Ke, isimilo sakhe somelele kwaye singqongqo. Unentliziyo elungileyo, kodwa kunzima kuye ukuyibonisa.
Ungumhlobo osenyongweni ka-Ana, kwaye uyintombi yenye yeentsapho ezizityebi zika-Avonela. Xa edibana noAna, uyachukumiseka yindlela yakhe yokuphila, kwaye ngenxa yoko, kwaye ngenxa yokuba babelana ngezinto ezifanayo, baba ngabahlobo.
Ungomnye wabafunda noAna, kodwa ukwangumntu obaluleke kakhulu oya kuthi aqhubeke nokuvela kwezinye iincwadi (ngesiphelo sakhe esimnandi). Ekuqaleni bangabaphikisi, kodwa uyamhlonela ngokufihlakeleyo kwaye uyamhlonipha ngendlela yakhe. Ke yena, ukhuthele, ukrelekrele kwaye angathanda ukuqhubeka nokufunda.
Emva kuka-Anne weGreen Gables
Ukuba ucinga ukuba uAna de las Tejas Verdes yincwadi eyodwa, uyaphazama. Inyaniso, Zizonke iincwadi, kodwa zintandathu kuphela ezibonisa "uAna" ngokwakhe. Sithetha ngazo zonke:
UAna waseTejas Verdes. Yapapashwa ngo-1908 kwaye yaqala lonke uthotho iinoveli. Kuyo, usazisa kwintombazana kunye nexesha leminyaka eli-11 ukuya kwe-16 ubudala.
UAna waseAvonlea. Yapapashwa emva konyaka, ngo-1909, kwaye ilandela ubomi buka-Ana, kodwa kule meko ukushiya kwakhe kwincwadi edlulileyo, xa wayeneminyaka eli-16 ubudala, kwada kwaba li-18.
UAna, la de la Isla.Yapapashwa ngo-1915 (kwiminyaka emi-6 emva kweyandulelayo), kwaye ibalisa ngobomi buka-Ana ukusuka kwi-18 ukuya kwi-22 yeminyaka ubudala.
UAna wase-oslamos Ventosos. Waphuma ngo-1916, wachaza ukuba bunjani ubomi buka-Ana ukusukela kwiminyaka engama-22 ukuya kwengama-25 ubudala.
UAna kunye neNdlu yamaphupha akhe. Yapapashwa ngo-1917. Kule meko, iminyaka yobudala buka-Ana yayineminyaka engama-25 ukuya kwengama-27 ubudala.
UAna waseNgleside. Yapapashwa ngo-1919, kwaye yokugqibela kweenoveli obekade Ana, ngubani uza kubalisa ubomi bakhe ukususela kwiminyaka engama-34 ukuya kuma-40.
Intlambo yeRainbow. Kubone ukukhanya ngo-1919 kwaye, nangona unokwazi okuthile ngo-Ana (ukusukela kwiminyaka engama-41 ukuya kwengama-49), inyani kukuba ijolise ngakumbi kubantwana bayo.
URilla waseNgleside. Eyokugqibela yeencwadi, eyapapashwa ngo-1921. Kule meko, uAna usukela kwiminyaka engama-49 ukuya kwengama-53 ubudala kodwa, njengakuqala, ngabantwana abathatha indawo.
Malunga noLucy Maud Montgomery, umbhali
ULucy Maud Montgomery, Eyaziwa nangokuthi nguLucy Montgomery okanye uLM Montgomery, wayengumbhali waseCanada owayehlala phakathi konyaka we-1874 nowe-1942. Ngelo xesha, eyona mpumelelo yakhe inkulu, nesakhunjulwa ngayo, yeyothotho lweenoveli u-Ana de las Tejas Verdes.
ULucy wazalelwa kwindawo eyaziwa ngoku ngokuba yiNew London, kwisiQithi iPrince Edward. Xa ndandineenyanga ezingama-21 ubudala, Umama usweleke ngenxa yesifo sephepha ngelixa utata wakhe emkile apho ehlala ngasentshona. ULucy wayenguye ngoko ophetheyo oomakhulu nootatomkhulu eCavendish, apho wakhuliswa ngokungqongqo.
Xa ndandineminyaka eli-15-16 ubudala, wathunyelwa eSaskatchewan ukuba aye kuhlala notata wakhe kunye nomama wakhe wesibini, kodwa akazange aphele unyaka nabo ngaphambi kokuba abuyiselwe kumakhulu notatomkhulu wakhe. Kungelo xesha ke awathi, akugqiba ukufunda, waqalisa ukufunda eCharlottetown, kwiKholeji yasePrince of Wales. Ngapha koko, yayintle kakhulu loo nto ikhosi yeminyaka emibini wayenza inye, kwaye wafumana isiqinisekiso sakhe, Ukuqhubeka nokufunda uncwadi eNova Scotia (iYunivesithi yaseDalhousie).
Wasebenza ixesha elithile njengomfundisi-ntsapho kwizikolo ezahlukeneyo, de kwafuneka abuyele eCavendish ayokuhlala nomakhulu wakhe ongumhlolokazi. Ngo-1901 nango-1902 wayeseHalifax kwaye esebenzela iphephandaba i-Chronicle ne-Echo.
U-Anne weGreen Gables uyindalo ekhuthazwe bubomi bakhe kwiPrince Edward Island. Ngapha koko, waqala ukuyibhala kwaye ngo-1908 wakwazi ukuyipapasha.
Ngo-1911 umakhulu wakhe wasweleka kwaye wadibana nendoda yakhe yexesha elizayo, u-Ewan McDonald, owatshata naye wafudukela e-Ontario. Wayesebenza njengomphathiswa weCawa yaseRhabe yaseSan Pablo kwaye babenabantwana abathathu. Ezi ncwadi zilandelayo zikaLucy Montgomery zabhalwa kule ndawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » U-Anne weGreen Gables
Unomathotholo noncwadi II. Udliwanondlebe nomazisi uPaco de León